सास किन गन्हाउँछ, रोकथामका लागी के गर्ने ?
डेण्टल सर्जन डा. तिर्थ भट्ट
काठमाडौं - सास गन्हाउने समस्या आम मानिसको साझा समस्या भएको छ । युवादेखि वृद्धहरुले पनि यो समस्या भोगिरहेका छन् । हेर्दा आकर्षक व्यक्ति पनि सास गन्हाएर हैरान भएका हुन्छन । सास गन्हाउने समस्या अनेक कारणले हुने गर्दछ ।
बिशेषगरी हामीले दैनिक खाइने खानापछि मुखको सरसफाईमा खासै ध्यान दिदैनैँ । जसका कारण सास गन्हाउने समस्या आउने हिमाल डेण्टल अस्पतालका डेण्टल सर्जन डा. तिर्थ भट्टले बताए ।
डा. भट्टका अनुसार हामीले दैनिक खाने खानाको स साना कणहरु टुक्रीएर दाँतमा अड्कने गर्दछ । मुखमा रहेको कणहरुलाई हामी बेवास्ता गरी ब्रस गर्दैनै । मुखमा टुक्रीएर रहेको कणहरुसगँ मिलेर ब्याक्टेरीयाहरुले हाइट्रोजन सल्फाइड र मिठ्यल मर्क्यापटन ग्यास बनाउछँ । र त्यहि ग्यास गन्हाउँछ ।
सास गन्हाउने समस्या मख्यगरी दाँत र मुख सरसफाईको कमीले हुने गर्दछ । त्यसबाहेक शरीरका भित्री भागमा भएका अंगहरुको समस्याले पनि यो समस्या हुन्छ । कलेजो, मिर्गौला, मधुमेह, कव्जियत, पेटको अल्सर, टिवि, निमोनिया, पिनास जस्ता समस्या भएको व्यक्तिमा सास गन्हाउने समस्या हुने गरेको डा. भट्टले बताए ।
उनका अनुसार गुलियो खानेकुराहरू खाइसकेपछि मुखमा केहि कणहरू बाँकी हुन्छन । जसप्रति ब्याक्टेरिया पनि छिट्टै आकर्षित हुने गर्दछन । त्यसबाहेक नियमित रुपमा दाँत नमाझ्ने, दाँतको फ्लस नगर्ने, जिव्रो सफा नगर्ने , मुख कुल्ला नर्गनाले योे समस्या निम्त्याउँछ ।
यो समस्याबाट बच्नका लागी दिनमा २ पटक साँझ बिहान राम्रोसँग दाँत माझनुपर्छ । दैनिक डेण्टल फ्लसद्धारा दाँत सफा गनुपर्छ । जिब्रोको माथिल्लो भाग सफा गर्नुपर्छ । कीरा लागेको र प्वाल भएको दाँतको उपचार गर्नुपर्छ । खानेकुरा खानेबित्तिकै कुल्ला गर्नुपर्छ । प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । हरेक ३ महिनामा ब्रस बदल्नुर्छ । प्रत्येक पटक २ देखि ३ मिनेटसम्म ब्रस गर्नुपर्छ । हरेक ६ महिनामा डेण्टिस्सँग दाँत परिक्षण गराउनुपर्ने डा. भट्टले बताए ।
मुख र दाँतको स्वास्थ्यमा ध्यान दिइएन भने मुख र जिब्रोको क्यान्सर हुने जोखिम उच्च रहन्छ । बाल्यवस्थादेखि नै कुल्ला गर्ने, दाँत माझ्ने बानी बसालेमा यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउँन सकिन्छ ।